‘हो हामीलाई थारु सभासद्हरुले टेरेनन्’ – Tharuwan.com
थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस)ले सोमबार ‘राज्य पुनःसंरचना, संघीयता र आदिवासी जनजातिहरुको हक अधिकार‘ विषयक विचार गोष्ठी आयोजना गरेको थियो। जसमा जानजति नेता, थारु सभासद् र अगुवाहरुलाई निम्त्याइएको थियो।
नक्सालस्थित क्राउन प्लाजा होटलमा सबैलाई बिहान ११ बजे उपस्थितिका लागि निम्त्याइएको थियो। तर दिउँसो १ बजिसक्दा पनि थारु सभासद्हरु उपस्थित भएनन्। कार्यक्रममा केही संस्थाका एकात ब्यक्ति, केही जनाजति नेता, थारु युवा र पत्रकारहरुको उपस्थिति थियो। सभासद्हरुको नाक भने नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र चौधरीले जोगाइदिएका थिए। उनी एक्ला थारु सभासद् थिए- जो उक्त कार्यक्रममा उपस्थिति थिए।
कोही आउने छाँटकाँट नदेखिएपछि साढे १ बजे उक्त कार्यक्रम सुरु भयो। कार्यक्रममा थारु अगुवा राजकुमार लेखी र जनाजति नेता ज्योति दनुवारले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे। डेढ घन्टे कार्यपत्रपछि फ्लोर ओपन गरिएको थियो। त्यसपछि सहभागीहरुले कार्यपत्रभन्दा पनि थाकसलाई आलोचना गरेका थिए।
पत्रकार तथा साहित्यकार कृष्णराज सर्वाहरीले थाकस पूरै लेखीको विचारमा चलेको आरोप लगाएका थिए। उनले भने, ‘थाकस लेखीको विचारमात्र चलेको छ। लेखीले जे भन्यो त्यहीमात्र भइरहेको छ। के धनिराम चौधरी (नवनिर्वाचित अध्यक्ष)ले थाकसलाई नेतृत्व दिन सक्दैनन्? के उनी आफैंसँग थाकस चलाउने हैसियत छैन। छ भने आफ्नो खुबी यहाँ देखाउसक्नुपर्योल। अरुको ब्यक्तिगत ऐजेन्डालाई संस्थाकै ऐजेन्डा बनाएर अघि बढ्नु राम्रो होइन।’
त्यतिमात्र हैन, थारु युवा आशिष चौधरीले पनि थाकसलाई आलोचना गरे। उनले यो कार्यक्रमको औचित्य थारु सभासद् बिना नहुने बताए। ‘तपाईँहरुको कार्यक्रममा सभासद्हरु किन आउँदैनन्। कि तपाईँहरुले उहाँहरुलाई निम्तो नै दिनुभएको छैन। यहाँ उठेका कुरा हामीभन्दा पनि सभासद्हरुलाई सुनाउनुपर्‍यो। किनकि उनीहरु नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा छन्। हामी सुनेर केही फाइदा हुनेवाला छैन,’ उनले भने।
जवाफ दिने क्रममा सभाका अध्यक्ष धनिराम चौधरीले थारु सभासद्हरु आफूहरुलाई नटेरेको स्विकार गरे। उनले पटकपटक फोन गर्दा पनि नउठाउने, मेसेज पठाउँदा पढ्न नजान्ने गुनासो गरे। निमन्त्रणा बाँड्ने जिम्मा सभाका महामन्त्री आमिरी चौधरीले पाएका थिए। तर उनले फोन गर्दा पनि सभासद्हरुले नउठाएको बताए। उनले भने, ‘कल रिसिभ नगरेर सबैलाई म्यासेज गरेको थिएँ। तैपनि कसैले प्रतिक्रिया जनाएनन्।’
धनिधार चौधरीले थारु सभासद्हरुलाई चेतावनी दिँदै भने, ‘कि हाम्रो पछि आउनुस् कि हामीलाई पछि लगाउनुस्। यता नि नआउने उता नि केही नगर्ने प्रवृत्ति त ठीक होइन।’ उनले जनताले आफ्नो हक अधिकार सुनिश्चित गराउँछ भन्ने उद्देश्य ले नै त्यहाँ पठाएको हो। त्यसैले उहाँहरु जनताप्रति बफादार हुनसक्नुपर्योच।
सर्वाहरीको उत्तर भने न धनिराम चौधरीले दिए। न राजकुमार लेखीले नै दिए।
ठाकुरद्वारमा झुम्रा र हुर्दंग्वा नाचमा झुम्दै पर्यटक
5 thoughts on “‘हो हामीलाई थारु सभासद्हरुले टेरेनन्’”
सत्य नै यही हो अनि। कृष्णराज जीले भनेको कुरा यदि गलत हुन्थ्यो भने धनीराम र लेखी जीले डटेर त्यसको प्रतिक्रिया दिन्थ्यो होला। थाकस यही ठाउँमा चुकेको छ। सत्यको सामना गर्ने हिम्मत तब आउछ जब कोहि व्यक्ति निर्दोष हुन्छन्। थाकसको नेतृत्व नै दोषपूर्ण छ।
म कृष्ण सर्वाहरीजीसंग एकदम सहमत छु,था.क. स.का अध्यछ धनीराम चौधरी लेखिकै हरूवा हुन् , सम्पूर्ण था.क.स.का नीति निर्माता लेखिनै हुन् र वहाकै इसारामा धनीरामजी चल्नुहुन्छ ! आजसम्म लेखीले भन्दै आको बहुप्रदेश भनेkoकति वटा?…पहाडमा जति तराई मा पनि तेतिनै रे ?भनेपछि वहालाई एकिन एक , दुई या तीन …थाहा छैन , भोलि पहाडमा एक , तराइमा एक र हिमालमा एक भन्यो या अरुले मान्यो भने थारुहरुले मान्ने कि नमान्ने?या विकल्प के त ??
थारु कल्यणकारी सभा लाई सम्पूर्ण थारु हरुको साझा संस्था बुझ्नु नै हाम्रो भुल हो । जस्को आफ्नै क्षमताले कार्यक्रम गर्ने सम्मको हैसियत छैन त्यो कसरी स्थाईत्व प्राप्त गर्ला ? था क स को नेत्रित्व को चरित्र थाहै छ नि बरु बर्घर अथवा महतवा प्रनाली लाई मलजल गरौ त्यसले सत्ता दिने क्षमता बढाउछ । मौजा , प्रगन्ना र चौरसी गादी लोकतन्त्रको जगमा उठाऔ र त्यसलाई पुन:सन्योजन गरौ बरु त्यो सत्ताको आधार बन्छ तर था क स उठाउनुस् लोभि पापी जन्मने निश्चित छ ।
यहाको देखिएको बहसमा था.क.स.को कार्यशैली र औचित्य माथी नै प्रश्न उठाईएको देखियो । था.क.स.को कार्यशैलीमा पक्कै पनि केही त्रुटी होला । यसमा सबैतिरका थारुहरुको सहभागिता र प्रतिनिधित्व तथा यसका निर्वाचनमा धेरै त्रुटीहरु हुनसक्दछन् । तापनि हाल सबै थारुहरुको यो नै साझा संस्था हो । यसमा हामी सबै थारुहरुको बराबर अधिकार छ र यसलाई थारुहरुको हितमा राम्रोसंग संचालन गर्ने दायित्व पनि हामी सबै थारुहरुको नै हो । हाम्रो यो संस्था फुटोस् र हामी थारुहरु कमजोर होऔं भन्ने कुरा त हामी माथी अन्याय गर्नेहरुले त चाहेको नै होला । तसर्थ आ-आफ्ना बिचार राखौं र अन्तमा थारु लगायत सबै नेपालीको न्यायोचित अधिकार सुरक्षित हुने बिचारलाई अनुमोदन गरी हामी सबै एकजुट भई अगाडी बढौं । थारुसंगै र थारुजस्तै तराईमा दोनवार, राजबंशी र अन्य अल्पसंख्यक आदिबासीहरु पनि छन् जो हामी जस्तै अन्यायमा परेका छन् । पहाडका आदिबासी भन्दा तराईका आदिबासीहरुको समस्या केही फरक छन् । एउटै तरिकाले नेपालका सबै आदिबासीहरुको समस्या समाधान हुन सक्तैन । त्यसकारणले सही बिचार ल्याउनको लागि सबैले चिसो दिमागले मन्थन गरी आ-आफ्ना बिचारहरु शेयर गरौं र तराईका आदिबासीहरुको न्यायोचित अधिकार प्राप्तीको लागि सबभन्दा राम्रो बिचारमा एकमत भई अगाडी बढौं । ‘राज्य पुनःसंरचना, संघीयता र आदिवासी जनजातिहरुको हक अधिकार’ विषयक गोष्ठीमा प्रस्तुत कार्यपत्र र त्यसमाथी उठेका बहसको बारेमा अध्ययन पछि मात्र म आफ्नो बिचार राख्नेछु ।
Hemraj Mahato says:
Tha. ka. sa.le bahu pradesh manda,tharu population sabai pradeshma ati kam bhaer purna samanupatik bewasthama pani ati kamjor dekhin6 ra rajayako harek nikaema jab tharuharuko kamjor represantation hun6 tab tharu jatiharuko pahichan ra astitawa ajha sankatma parna sak6, tesaile Tha. Ka. Sa. jasto sabai Tharu haruko sajha sansthale alikati bibek purayar Mechi dekhi Mahakali samako Teraika jillaharuko total population ra Tharuharuko total populationko scientifically calculation garer Sanghiya pradeshko barema sajha dharana banaer aghi badhema ramro hun6 naki Raj Kumar Lekhi sit sati gaer hun6.